Militeriga Suuriya oo Ku Wajahan Douma. | Puntland
Militeriga Suuriya oo Ku Wajahan Douma.
Ciidamada Dowladda Suuriya ayaa isku diyaarinayaa iney howlgal Militari qaadaan si ay u qabsadaan Douma oo ah meesha ugu danbeysa oo ay ku harsan yihiin Kooxaha Falaagada ee Bariga Ghouta,sida ay warbaahinta gudaha sheegtay.
Wargeyska ugu Afka dheer ee xiriirka la leh Dowladda ayaa ku waramay Arbacadii shalay in Ciidamo ka tirsan Dowladda Suuriya ay gaareen duleedka magaalada Douma,halkaasi oo ay si weyn ugu xooggan yihiin Kooxda Falaagada ah ee Jaish.
Abaabulka ugu weyn ayaa ah in Mucaaradka laga saaro magaalada si looga fogaado guuldarana waxay Ciidamada qaadayaan howlgal Militari oo xooggan oo mudo badana laga fiirsanayay.
Ciidamada Ruuska ee xulafada la ah madaxweynaha Dowladda Suuriya Bashar al-Asad, ayaa maalmo dhowr ah wada hadal kula jiray Kooxda Jaish,balse ilaa iyo hadda wadahadalada wax natiijo ah oo ka soo baxay ma jiraan.
Dad lagu qiyaasay 140,000-ruux ayaa ku harsan magaalada Douma,kuwaasi oo aanay heysan cunto,Biyo daawooyin caafimaad oo ku filan.
Ciidamada Bishar Al-Asad oo gacan ka helaya diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka Ruuska ayaa isku diyaarinaya in Kooxaha Falaagada si buuxda kagala wareegaan magaalada,halkaasi oo laga soo sheegayo xaalado bini-adanimo oo aad u daran.